Tsika - Bezzia | Bezzia
El nyika yetsika Icho chinhu icho chatinoda kuratidzira mumagazini yedu, sezvo isu tichifarira chero chiitiko chinogona kupfumisa vakadzi. Naizvozvo, isu tichafukidza zvese zvine chekuita neema cinema, mimhanzi, literatura kana chero imwe nzvimbo yehunyanzvi.
Isu tichave zvakare takatarisa kune chero nyowani nyowani kuburitswa kwemufirimu, bhuku kana albha, isu tichanyatso tevera vanyori vanozivikanwa pane izvi nyaya uye isu tichakuudza iwe iwo mazita atinoona seanonakidza kudya.
Uye zvakare, isu ticha tarisa pane tsika nemagariro kudya semhuri, nekuti hapana chinhu chiri nani kunze kwehurongwa hwehunhu uhwu hwekunakidzwawo nemumwe wedu kana vana. Rutivi rwekudanana kana zvigadzirwa nemadzimai echikadzi sevamiriri vanowanawo nzvimbo yakakosha.
Tsika naizvozvo chinhu chakakosha mumitsara iyi uye tinoda hunyanzvi nehunhu kuva nenzvimbo uye kutaurwa kwakakosha. Zivo isimba.
kubudikidza Maria vazquez inoita 4 mazuva .
Iko hakuna vazhinji vanotsunga kuburitsa albhamu muna Zvita, asi mashoma anoburitswa anoita seakawanda kana vese vaungana ...
Kune dzakawanda nhau dzemupepeti svondo rega rega uye hatikwanise kusvika kune dzese. Asi sezvakangoita vaviri ...
Mhemberero dzeVatendi Vese neHalloween dzinopa mhepo umo nyaya dzinotyisa dzinogara dziine nzvimbo….
Uye kana tichiti zvinotevera, tinoreva mumavhiki mana anotevera. Kune mamwe akawanda, zviripachena iwo mafirimu ari ...
Spanish mafirimu ayo achaburitswa munaGumiguru anotevera
Kuchave nemafirimu mazhinji eSpanish ayo achaburitswa munaGumiguru anotevera mumabhaisikopo edu. Mazhinji acho ...
Nhau dzemimhanzi dzemwedzi waNyamavhuvhu
Vhiki rapfuura hatina kukuunzira nhau dzemimhanzi dzakasarudzika senguva dzose muvhiki yekutanga yemwedzi….
Vaparidzi havazorore uye kunyangwe muzhizha vanotipa meno akareba nenhau dzekunyora idzo dzakasvika ...